Manchester United Oo Isha Ku Heysa Inay Bisha Janaayo Lasoo Wareegto Kieran Trippier
HomeWararka CiyaarahaManchester United oo isha ku heysa inay bisha Janaayo lasoo wareegto Kieran Trippier
November 20, 2021 Wararka Ciyaaraha, Horyaalka Ingiriiska, Horyaalka Spain, Suuqa kala iibsiga 0
Manchester United ayaa lagu soo waramayaa inay weli xiiseyneyso saxiixa Kieran Trippier , waxaana laga yaabaa inay u dhaqaaqdo daafaca Atletico Madrid inta lagu guda jiro suuqa kala iibsiga ee Janaayo.
Red Devils ayaa si xoogan loola xiriirinayay xiddiga heerka caalami ee dalka England xagaagii hore laakiin waxa ay la heshiin waayeen Atletico oo ku saabsan qiimaha suuqa kala iibsiga.
Aaron Wan-Bissaka ayaa ku dhibtooday inuu qaab midig dib xilli ciyaareedkan, halka Diogo Dalot ayaa hadda si xoogan lala xiriirinayay inuu u dhaqaaqayo Roma .
Sida laga soo xigtay Manchester Evening News , Man United ayaa kaliya diyaar u ah inay u ogolaato Dalot inuu kooxda ka tago haddii Trippier uu ka yimaado kooxda heysata horyaalka La Liga bisha Janaayo.
Warbixinta ayaa sheegeysa in 31-sano jirku uu weli yahay bartilmaameedka koowaad ee kooxda Ole Gunnar Solskjaer , halka daafaca uu go’aansaday inuu ku soo laabto Premier League sanadka soo socda.
Trippier ayaa mar kale ahaa ciyaaryahan muhiim u ah Atletico xilli ciyaareedkan, isagoo saftay 15 kulan tartamada oo dhan, laakiin hadda waxa uu ku maqan yahay dhaawac garabka ah.